Manatsara ny fampiofanana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko i Marriott
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Manatsara ny fampiofanana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko i Marriott
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Zon'olombelona • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Nanao dingana manaraka i Marriott mba hampiofanana ny mpiara-miasa rehetra hahafantatra sy hamaly ireo trangana fivarotana mety hitranga amin'ny 2025.
Niova be izao tontolo izao tao anatin'ny dimy taona taorian'ny nanombohan'ny Marriott International ny fiofanana voalohany.
Ny COVID-19 dia niditra am-piandohana traikefa amin'ny hotely tsy misy ifandraisany sy finday, izay mety hanasarotra kokoa ny mahita ireo mariky ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Ny fiofanana vaovao dia novolavolaina tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo sisa velona tamin'ny fanondranana olona.
Nanambara ny Marriott International androany fa amin'ny 30 Jolay, Andro manerantany hiadiana amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko, ny orinasa dia hamoaka kinova fanavaozana ny fanofanana momba ny fanondranana olona - ny dingana manaraka amin'ny tanjon'ny Marriott hampiofana ny mpiara-miasa aminy rehetra hanaiky sy hamaly. mety ho famantarana ny fanondranana olona an-tsokosoko any amin'ny hotely amin'ny 2025.
Niova be izao tontolo izao tao anatin'ny dimy taona lasa Marriott International nandefa ny fiofanana voalohany. Ny COVID-19 dia niditra am-piandohana traikefa amin'ny hotely tsy misy ifandraisany sy finday, izay mety hanasarotra kokoa ny mahita ireo mariky ny fanondranana olona an-tsokosoko.
Ny fiofanana vaovao dia miorina amin'ny fototr'ilay fiofanana tany am-boalohany tamin'ny alàlan'ny fanolorana ireo modely miorina amin'ny scenario, famolavolana finday ary fampitomboana torolàlana momba ny fiatrehana ireo toe-javatra mety hitranga amin'ny fanondranana olona - fanatsarana manara-penitra mifototra amin'ny tamberin'ny hotely hanampiana ireo mpiara-miasa hamadika ny fahatsiarovan-tena hetsika ary tohizo ny ady amin'ny heloka bevava amin'ny firenena maro.
Ho fanampin'izany, ny fiofanana vaovao dia novolavolaina niaraka tamin'ny tafavoaka velona tamin'ny fanondranana olona an-tsokosoko, hiantohana ny fiofanana ho mifototra amin'ny iharam-boina ary hampahafantarina ireo tafita velona.
"Amin'ny maha indostria izay miahy fatratra ny zon'olombelona sy ny heloka mahatsiravina amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko, dia tena tompon'andraikitra amin'ny famahana ity olana ity amin'ny fomba misy heviny izahay," hoy i Anthony Capuano, Chief Executive Officer ao Marriott International. "Ny fiofanana nohavaozina dia manome hery ny mpiasa manerantany izay vonona ny hanaiky sy hamaly ny fanondranana olona an-tsokosoko ary mamela ny orinasanay hiaina mifanaraka amin'ny soatoavina fototra."
Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny ECPAT-Etazonia ary miaraka amin'ny fidiran'i Polaris, orinasa roa tsy mitady tombombarotra manokana miady amin'ny fanondranana olona an-tsokosoko, dia nanangana fiofanana momba ny fanondranana olona an-tsokosoko tamin'ny taona 2016 i Marriott ary nandidy izany ho an'ny mpiasa an-trano rehetra amin'ny fananana tantana sy manana zaridaina manerantany amin'ny Janoary 2017. Noho izany hatreto, ny fiofanana dia natolotra tamin'ny mpiara-miasa maherin'ny 850,000, izay nanampy tamin'ny famaritana ireo tranga fanondranana olona, ​​niaro ny mpiara-miasa sy ny vahininy, ary ny fanohanana ireo niharam-boina sy ireo tafavoaka velona.